साताको ब्लगरः सन्तोष पौडेल - MeroReport
साताको ब्लगरः सन्तोष पौडेल
रामेछाप घर भएका सन्तोष पौडेल हाल काठमाडौं, शान्तिनगरको सान्त्वना मेमोरियल कलेजमा स्नातक तेस्रो वर्ष म्यानेजमेन्ट विषयमा अध्ययनरत छन । उनी अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा Project IT Assistant रुपमा कार्यरत छन ।
ब्लगिङ गर्न थालेको एक वर्ष भएको बताउने सन्तोष नेपालमा ब्लगिङको धेरै सम्भावना भएको र भविष्यमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा विश्वस्त छन ।
ब्लगिङ र सोसल मिडियाबारे विविध कुराकानी गर्ने क्रममा हामीले सन्तोषलाई यसपाली साताको ब्लगरको रुपमा फिचर गरेका छौँ :
ब्लगिङबारे केहि कुराकानी
ब्लगिङ गर्न कसरी थाल्नु भयो ?
मेरो सानै देखि लेख्ने बानी थियो । काठमाडौं आएर पनि मैले लेख्थेँ । तर त्यो कागजमा मात्रै सिमित भयो कति त हरायो । अर्थालयले एक वर्ष अगाडी ब्लगिङको बारेमा ट्रेनिङ गरेको थियो । ब्लगर सुरथ दाईले ट्रेनिङ दिन लाग्नु भएको रहेछ । एक जना साथीले ट्रेनिङ लिने सुझाव दियो र मैले एक दिने ब्लगिङको वर्कसपमा भाग लिएँ । त्यहाँबाट मैले ब्लग बनाउन सिकेँ र ब्लगिङ गर्न थालेँ । अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिरहेको छु ।
के - के पोस्ट गर्नु हुन्छ ?
त्यस्तै समसामयिक विषयवस्तु , घुमेका ठाँउको वर्णन, फोटो, पढेका किताबको रिभ्यु, आफुले पढेका अर्थशास्त्रको किताबहरुको अनुवाद पनि गर्ने गर्दछु । तर यि विषयमा मात्र सिमित छैन ।
अत्यधिक रुचाइएको ब्लग पोस्ट
निकै रुचाइएको ब्लग पोस्ट छन कुनै ?
एउटा ब्लग पोस्ट छ सन्तु र सन्तुको गाँउ । यसलाइ खिम्ती आवाज रामेछापले पनि प्रकाशित गरेको थियो । एउटा विकट ठाँउबाट एउटा केटा काठमाडौं पढ्न आँउछ । गाँउमा त उ त्यस्तो राम्रो पढ्छ भने शहरमा आएर पढ्यो भने उ कस्तो बन्छ होला भनेर लेखेको छु । यो अत्यधिक रुचाइएको छ र मेरो पनि जीवनमा आधारित भनेको भएर मलाई पनि मन पर्छ ।
अर्को ब्लग पोस्ट युवाका कुरा बाट पनि राम्रो प्रतिकिया पाएको छु । युवाको अवस्था नेपालमा कस्तो छ । युवा के गरिरहेका छन । यहाँ हजारौ युवा छन जसले राम्रो काम गरेका छन उहाँहरुलाई किन सम्मान गरिदैन भनेर लेखेको छु ।
प्रतिकिया कस्तो पाउने गर्नु भएको छ आफ्नो ब्लग पोस्टबाट ?
शब्द संयोजन , लेख्ने शैली र प्रस्तुती राम्रो छ । लेखन शैलीले गर्दा पाठकहरु आकर्षित हुन्छ । अझै कथाहरु लेख्दै जाउ भनेर प्रतिकिया आउने गर्दछन ।
ब्लगिङ गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा ?
विषयको छनोट, भाषा संयोजन, प्रस्तुती र शब्दावली साथै सामाजिक सहिष्णुतामा पनि ध्यान दिनु पर्छ । जस्तै कसैको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी, कसैलाई व्यतिगत जीवनमा असर पर्ने गरी लेख्नु हुँदैन ।
आचार संहिताको पालना जरुरी छ ?
आचार-संहिता पालना गरेर यथार्थलाई प्रस्तुत गर्न सकिदैन तर गलत नियति, गलत उदेश्य बोकेका ब्लगरहरुलाइ नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालमा ब्लगिङको ट्रेन्ड कस्तो छ ? ?
नेपालमा ब्लगिङको ट्रेन्ड अत्यन्तै राम्रो छ । किनभने अहिलेको वर्तमान अवस्थामा मिडियामा राजनितीको कैची चल्छ । तर ब्लगमा व्यक्तीको विचार स्वन्तन्त्र रुपले व्यक्त भइरहेको हुन्छ । यसरी आमपाठकमा सत्य-तथ्यको उजागर भईरहेको हुन्छ ।
मेरो विचारमा ब्लगिङको धेरै सम्भावना छ । भविष्यमा यसको राम्रो स्थान छ र यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
सोसल मिडियाबारे केहि कुराकानी
अरु कुन -कुन सोसल मिडिया चलाउनुहुन्छ ?
बढीजसो फेसबुक नै चलाउँछु । त्यसपछी टुइटर चलाउँछु । याहु , जि मेलहरु त सामान्य नै भहाल्यो ।
किन प्रयोग गर्नु हुन्छ सोसल मिडिया ?
मेरो लागि सोसल मेडिया सादा पाना हो जहाँ मेरो विचार धारणा आफ्नै शैलीमा पोख्न पाउँछु । आफ्नो फरक परिचयको लागि पनि सोसल मिडिया चलाउँछु ।
सोसल मिडियाले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
सोसल मिडियाले ठुलो प्रभाव पारेको छ । राम्रा र नराम्रा दुबै । राम्रो प्रभावको कुरा गर्नु पर्दा जानकारीको आदान-प्रदान बढेको छ । टाढा - टाढा बिदेशमा बस्ने साथीहरुसँग पनि सम्पर्क भइरहेको छ । भर्खरै हेल्थ नेपाल नेटवर्कलाई जिताउन हजारौँ भोटहरु फेसबुकको माध्यमबाट नै सम्भव भएको थियो । युवा जागरण, सचेतनाका कार्यक्रम पनि फेसबुकबाट फैलिएका छन ।
फेक अकाउन्ट बनाउने, व्यक्तीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी पोस्ट गर्ने, अरुलाइ असर गर्ने जस्ता कार्य पनि भएका छन । समय बिताउने माध्यमको रुपमा पनि प्रयोग भएको छ ।
सोसल मिडियामा छलफल हुने गरेका विषय के के हुन ?
सोसल मिडियामा युवाहरु र अग्रजको सहभागिता रहेको छ जसले जागरण अभियान, युवासँग सम्बन्धित बिभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेका छन । जस्तो सरसफाइ कार्यक्रम र बिभिन्न अभियानहरु। राष्ट्रिय स्तरका बहसहरु , राजनितिक, आर्थिक र समसायिक विषयमा गरिने यस्तो छलफलहरुले हाम्रो ज्ञानको स्तरलाई बढाएको छ साथै यी बहसले आम-मानिसलाई जागृत गरेर सचेत गराइदिएको छ ।
एक अभियानकर्मी उज्ज्वल दाइको अनुसार हामीले एउटा मन्च खडा गर्नु पर्छ जसले नेपालको राजनितिमा लागेका व्यक्तिलाइ झक्झक्याउनु पर्छ भन्ने जस्ता विचारहरु सोसल मिडियामा छलफल हुने गरेका छन । कुरा गर्ने मात्र होईन काम गर्नु पर्‍यो । ठुला-ठुला कुरा मात्र होइन, साना - साना कुरामा बहस गर्ने र सकारात्मक र परिवर्तनको सोचहरुको बारेमा छलफल हुने गर्दछ ।
के यी छलफलहरु प्रभावकारी छन ?
अवश्य पनि यो प्रभावकारी छ । कमसेकम त्यस्ता विविध विषयमा भएको छलफलबाट आम मानिसमा के सही के गलत भनेर छुट्याउन मद्दत गर्छ । कुनै पनि घटनामा के भयो, को दोषी थियो, के हुनुपर्थ्यो भनेर बहस गर्न मद्दत गर्छ । यस्ता छलफलले वास्तबिकता बुझ्न मद्दत गर्छ ।
सुचना प्रविधीको शक्ती कति छ भनेर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसको प्रयोग, उपयोग र परिचालन कसरी गर्ने भनेर व्यक्तीमा भर पर्ने कुरा हो । सकारात्मक सोच, लगाव र राम्रा कुराहरुलाई आम नेपाली र सचेतक वर्गमा पुर्‍याउने हो भने ।
मेरोरिपोर्टको बारेमा केहि भन्नु चाहनुहुन्छ ?
आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्न चाहने मानिसको लागि मेरोरिपोर्टले राम्रो अभियान सुरु गरेको छ ।
कति व्यक्तिलाइ ब्लगको बारेमा केहि थाहा छैन । उनीहरु उत्कृष्ट लेख्छन तर त्यो पानामा मात्रै सिमित छ । त्यसैले मेरोरिपोर्टले ब्लग सम्बन्धि तालिम दिनुपर्‍यो ।
मासिक, पाक्षिक र बार्षिक रुपमा ब्लग सम्बन्धित उत्कृष्ट ब्लगहरुलाई म्यागजिन बनाएर प्रकाशित गर्‍यो भने ब्लग पढ्न बन्चित भएका व्यक्तिले पनि पढ्न पाउँछन ।
Comment by Surath Giri on December 9, 2012 at 11:05am
It was my pleasure to help you createablog and express yourself. Keep Blogging!
Comment by Santosh Paudel on October 4, 2012 at 4:11pm
धन्यवाद दाजु प्रेम अनि दिज्यु क्रान्ति हजुरको लागि पनि !!!
Comment by Kranti Darai on October 4, 2012 at 2:53pm
congratulations Santosh ji :)
Comment by Santosh Paudel on October 4, 2012 at 2:36pm
धन्यवाद दाजु इन्द्रध्वज र कमल अनि संगै दिज्यु अजिता हजुरलाइ पनि !!
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on October 4, 2012 at 2:04pm
बधाई छ सन्तोष जी !! तपाईका ब्लगिङका विचारको लागि
Comment by Indra Dhoj Kshetri on October 4, 2012 at 10:35am
Congratulations Santosh!!! Keep up the good work. :)
Comment by Kamal Paudyal on October 3, 2012 at 5:21pm
Congratulations ! santosh bro...
Comment by Ajeeta Sigdel on October 3, 2012 at 4:50pm